Hawlgallo isugu jira bannaynta jidadka xirmay & sare u qaadidda bilicda Galkacyo oo ay wali waddo dawladda hoose. – Radio Daljir
Hawlgallo isugu jira bannaynta jidadka xirmay & sare u qaadidda bilicda Galkacyo oo ay wali waddo dawladda hoose.
Janaayo 24, 2010 12:00 b 0
Galkacyo, Jan 24 – Muddo dhawr bilood ah magaalada Galkacyo waxaa ka socday hawlgallo ballaaran oo uu waday maamulka dawladda hoose iyo ururro dhallinyaro oo si iskood ah isku xilqaamay.
Hawlgalladaan ayaa ku saabsanaa soo celinta bilic-samida magaalada Galkacyo iyo bannaynta dhammaanba jidadka xirmay ee dhaxmara magaalada, kuwaasi oo dadweynu ay u dageen deegaanna uga samaynteen si qorshe la’aan ah.
Tallaabadaan lagu bannaynayey waddooyinka iyo jidadka yaryar ee xirmay, ayaa waxaa hormuud ka ahayd maamulka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo, waxaana kala qayb qaadanayey ururro dhallinyaro oo xafiisyo ku leh magaalada Galkacyo kuwaasi oo uu ka mid yahay ururka isbaddel doonta iyo hormarinta arrimaha bulshda kaasi oo ah urur la asaasay dabayaaqadii sanaddii 2008 gaar ahaan xilligii la isku diyaarinayey doorashooyinka madaxtinimada Puntland.
Inta badan waddooyinka iyo jidadkii xirnaa ayaa lagu guulaystay in la banneeyo iyadoo loo maray hab wacyi galin ah oo bulshasa laga dhaadhiciyey ahmiyadda iyo muhiimadda bannaynta jidadka xirmay ay u leeyihiin bilicda magaalada iyo isku socodka bulshada deggan gobolka.
Furista waddooyinkaasi, waxaa dhinac socday olale nadaafadeed oo ay sidoo kale wadeen maamulka dawladda hoose iyo ururrada dhallinyaradu waxaana dhammaan magaalada laga aruurshay qashinkii yaallay waddooyinkii xirnaa, kuwa furan ee ay dadweynaha iyo gaadiidku isticmaali jireen iyo sidoo kalana dhammaan meelaha faras magaalaha ah ee ay indhaha dadweynuhu qabtaan.
Inkastoo si fiican loogu guulaystay qaadista tallaabadaasi oo ay wax badani ka hirgaleen, waliba ay socota shaqadu illaa iyo haatan, haddana waxaa wali xal loo helin dadweynuhu in ay joojiyaan qubista qashinka oo ay dhigaan waddooyinka iyo goobo kale xilliga habeenkii, iyadoo ay jiraan goobo loo cayimay in la geeyo shaqshinka magaalada laga aruuriyo.
Tallaabadaan dawladda hoose iyo dadweynuhu iska kaashadeen ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid wax ool ah marka dhankasta laga eego, waxaana haatan magaalada laga hirgaliyey Jardiinooyin aad u dhaadheer oo lagu beeray dhir loogu talo galay in ay bisho bilicda magaalada.
Waa markii ugu horrsay oo magaalada Galkacyo laga sameeyo dhirayn iyo Jardiinooyin beeraha ah, taasi oo kor u qaadaysa quruxda iyo bilic-samida magaalada, wixii ka danbeeyey burburkii dawladdii Soomaaliya.
Hay?adda waddooyinka Puntland ee NESHA oo dayactir ka wadda laamiga u dhaxeeyey Galkacyo iyo Cagaaran.
Maxkamadda Boosaaso oo xukun dilka ah ku ridday labo nin oo midkood ku eedaysnaa in uu dilay xildhibaan ka tirsan Baarlamaank Puntland.